Torvalds akasimudza nyaya yekuwedzeredzwa kudzivirirwa kuna Specterv2 | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura Mutungamiriri weLinux Kernel Development Linus Torvalds akaronga kuongorora mashandiro ekumisikidza STIBP zvigamba (Imwe Thread Yakasarudzika Bazi Vanofanotaura), iyo inopa imwe dziviriro kubva kuSpecter v2.
Aya mavara akasanganiswa muLinux kernel bazi 4.20 iri kuvandudzwa uye yakatumiswazve kune yakasarudzika vhezheni yeLinux kernel 4.19.2.
Nekushandisa STIBP mune yazvino fomu, vashandisi wakaona kuderera kukuru mukuita kweamwe mafomu paunenge uchishandisa iyi yehunyanzvi hwekuverenga tekinoroji (SMT kana Hyper-Threading).
Kubvira kudonha kwekuita kunogona kusvika 50%, mumashoko aLinus Torvalds pachake, kushandisa STIBP mune yazvino fomu haina zvainorevasezvo zviri nyore uye zvakavimbika kuremadza SMT / Hyper-Threading zvizere, izvo zvinowanzoitwa nevanhu vanoziva nezvekuchengetedza.
Kuderera kukuru kwakakonzerwa neLinux 4.20 kernel nyowani kuri nekuda kwekudzikisira kweSpecter musiyano 2 uyo Linux muvambi Linus Torvalds ikozvino anoda kudzora.
Apa ndipo panomuka mubvunzo kana zvichikosha kugonesa STIBP nekukasira, apo SMT / Hyper-Threading yatove yakaremara kune avo vane hanya chaizvo nezve kuchengetedzeka.
Kunyange, Kune vese vashandisi, 50% kurasikirwa kwekuita chinhu chakakosha chingamiririra dzimwe nyaya uye Zviri kusahadzika kana izvi fungidziro yekushushikana yakakodzera kuvharirwa.
1 Torvalds inoda kuti STIBP isisabvumidzwe nekutadza
1.1 Iko kushandiswa kwekushandisa kwe STIBP kunofanirwa kudzoserwa
Torvalds inoda kuti STIBP isisabvumidzwe nekutadza
Nokuda kwayo Linus Torvalds inofunga kuti kurwisa kunoshanda kunoenderana neSpecter v2 haigone kubuda se, pane zvakajairika masisitimu evashandisi.
Linus Torvalds anoti mabhurawuza ndiwo anonyanya kurwisa, ayo akatowedzera kudzivirirwa padanho ravo (iyo tyisidziro ndeye nzira dzeJIT dzakazvimiririra uko nzira yekudzivirira inosarudzwa inogona kugadzirwa).
Se inofunga kushandisa nekumira chete nzira dzekudzivirira dzeSpecter, dzisingatungamire kudonha hombe mukuita, asi shandisa nzira dzekuwedzera sarudzo kana senzira.
Saka nei iyo STIBP ichinonoka nekukasira kana vanhu avo * chaizvo * vane hanya vatove vakaremara SMT?
Ini ndinofunga isu tinofanirwa kushandisa imwecheteyo pfungwa seye L1TF - nekutadza isu hatigone kubvisa mashandiro. Ipa yambiro imwe nezvazvo uye rega vanhu vanopenga vataure "Ini ndoda kuva ne50% yekubudirira pane kungonetsekana nedambudziko redzidziso." Linus torvalds
Iko kushandiswa kwekushandisa kwe STIBP kunofanirwa kudzoserwa
Kune rumwe rutivi, Intel's Arjan van de Ven yakati Intel ne AMD havakurudzire kushandiswa kwe STIBP nekukasira se kuti kuita uku kunogona kufananidzwa nesando inorema kwazvo, sezvo isiri kushandiswa mukushanda kwemazuva ese, asi kunodiwa mune mamwe mamiriro.
Anopokana nazvo iyo STIBP michina inotsanangurwa mune microcode yekuvandudza inokutendera iwe kudzora kudzima kwemaprosesa cache nekumisikidza yakakosha chidimbu muCR0 rejista, iyo isingafanire kuitwa kwese kwese, asi chete mune zvakanyanya mamiriro akaomarara.
Intel's Tim Chen akaronga kuti kusarudzika kwekuvharwa kwesandbox kurwisa kunosanganisira STIBP chete kana zvanyatsokumbirwa kuburikidza neprctl kana maitiro anochirambidza kugadzirwa kwemukati memusoro marara (PR_SET_DUMPABLE), sshd.
Kana iri yekudonha kwekuita kana uchishandisa STIBP zvigamba paLinux Kernel 4.20, mhedzisiro yacho inoenderana zvakanyanya nerudzi rwemutoro.
Semuenzaniso, bvunzo dzakaitwa dzakaratidza kuti iyo SpecInt Rate 2006 package inoratidza kudzikira kwekuita kwe21%, nepo Phoronix bvunzo dzichiratidza kudzikisira kwekuita kwe3% kusvika 20%.
Ingo Molnar anonyatso kuzivikanwa weLinux Kernel mushambadzi uye munyori weCFS Task Shedhiyo, achitsinhira pamamiriro ezvinhu, akakurudzira kuwedzera runyorwa rweshanduko kune ruzivo rwekuita kwekuita kana mhinduro dzematambudziko dzawedzerwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Torvalds akasimudza nyaya yekuwedzeredzwa kudzivirirwa kuna Specterv2
Wona maYUV mafaera nerubatsiro rweYUView paLinux